Myanmar Daily Mail: February 2012
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စတင်ဖွင့်လှစ် ၊
ရွှေတိဂုံ နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် သံဃာတော်အပါး ၂၆ဝဝ အတွက် မထသ ပင့်ဆောင်မည် ၊
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရွှေတိဂုံ နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် ပူဇော်ပွဲ ၊
နှစ် 2600 ပြည့် မြတ်ရွှေတိဂုံ ၊
လူလိမ်တွေ ပွေလီရှုပ် တန့်ကြည်တောင်ဇာတ်ထုတ် ၊
အာနာပါန သတိပဌာန် ရှုမှတ်နည်း အကျဉ်း ၊
ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ ရုပ်ထုတွေ ၊
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စတင်ဖွင့်လှစ်
16:48 Myanmar Express Group 1 comment
From : MRTV-4
သာသနာ သက္ကရာဇ် ၁၀၃ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူခဲ့တဲ့ ရွှေတိဂုံ စေတီေ တာ် မြတ်ကြီး ရဲ့ နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား မှာတော့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ တန်ဆောင်းမှ စတင်ကာ စေတီတော်မြတ် ကြီးကို လက်ယာရစ် လှည့်လည်ပူဇော်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စေတီတော် ရာဟုထောင့်အောင်မြေရှိ ဗဟိုမဏ္ဍပ်နဲ့ မဟာပဋ္ဌာန်းမဏ္ဍပ်မှာ နမောတဿ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ရွှေတိဂုံစေတီေ တာ် ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ကျင်းပရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖွင့်မင်္ဂလာစကား ဖတ်ကြားခြင်း နဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအား ပင့်လျှောက်ခြင်း၊ ကုသိုလ်တော်ပြု လုပ်ဖို့ အတွက် နတ်ဗြဟ္မာများ ကို ဖိတ်ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်သြ၀ါဒစရိယ ဗန်းမော် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီေ တာ် နှစ် ၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်အတွက် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူများမှ ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားရှင်တို့ကို ရည်စူးပြီး ဆီးမီးများထွန်းညှိ ပူဇော်ကာ ရွှေတိဂုံစေတီေ တာ် နှစ် ၂၆၀၀ပြည့်၊ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့ ကနေ မတ်လ ၇ရက်နေ့အထိ ၁၅ရက်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကျင်းပပြုလုပ်ရာမှာ အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ခြင်း၊ ပွဲတော်ကာလအတွင်း ပန်းများဝေဆာနေတဲ့ ပန်းပင်ပေါင်း ၅သိန်း ၄သောင်းနဲ့ ပူဇော်ခြင်းများနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်နေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညစဉ်၊ ညတိုင်း တရားပွဲများ ကျင်းပပြု လုပ်ခြင်း၊ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ပွဲတော်ကာလအတွင်း စေတီေ တ်ာရှိ အရံစေတီများ တန်ဆောင်းများ စတဲ့နေရာတွေမှာ ဆီမီးများနဲ့ ပူဇော်ခြင်းများလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေတိဂုံ နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် သံဃာတော်အပါး ၂၆ဝဝ အတွက် မထသ ပင့်ဆောင်မည်
18:24 Myanmar Express Group No comments
From : ပေါ်ပြူလာ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်သို့ သံဃာတော်အပါး ၂၆ဝဝ တို့အား မော်တော်ယာဉ် အစီး ၂၃ဝ ဖြင့် ပင့်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မထသ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)မှ သိရသည်။ ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာ တင်ပွဲနှင့် ဆွမ်းဆန်တော် လောင်းလှူပွဲကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်လေးခုမှ သံဃာတော် အပါး ၂၆ဝဝ ကို ပင့်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ခြင်းကို မထသ(ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး)မှ တာဝန်ယူ ထား ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြော သည်။ ဆက်လက်၍ ၄င်းက "အဲဒီ နေ့က ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်၊ ခရီးသည်တွေ အခက်အခဲ မဖြစ် ဖို့အတွက် ကျန်တဲ့ ခရိုင်ယာဉ်လိုင်း အသီးသီးနဲ့ ပါရမီက ယာဉ်တွေကို စိပ်စိပ်ကလေး ပြေးဆွဲပေးဖို့မှာကြား ပြီးဖြစ်တယ်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ နိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ကြီးကြပ် နိုင်ဖို့ ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်"ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က ပြောသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၇ ရက်ထိ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကော်မတီ၏ အောက်တွင် ယာဉ်စီးရေ ၂၄၆၄ စီးရှိသော်လည်း လက် ရှိတစ်နေ့လျှင်ပြေးဆွဲနိုင်သော ယာဉ်စီးရေမှာ ၁၈ဝဝ ကျော် ရှိကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရွှေတိဂုံ နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် ပူဇော်ပွဲ
20:14 Myanmar Express Group No comments
ဤကမ္ဘာလောက၌ ဂေါတမ ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့သည်မှာ နှစ် ပေါင်း ၂၆ဝဝ တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒုက္ကရစရိယာ အကျင့်မြတ်ကို ခြောက်နှစ်မျှ ကျင့် တော်မူပြီးနောက် သဗ္ဗညုတ ရွှေ ဉာဏ်တော်ကို ရရှိတော်မူခဲ့ပါ၏။ ဘုရားရှင်အဖြစ်သို့ ရောက် တော်မူပြီး သတ္တာ သတ္တဟ စံနေ တော်မူစဉ် မွန်နိုင်ငံတော် အသိ တဥနာဂိုရ် ပြည်မှ ကုန်သည် ညီ နောင်ဖြစ်သော တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက တို့သည် ရာဇယတနတွင် ဗုဒ္ဓအား ဖူးမြော်ခွင့်ကြုံပါ၏။ ဘုရားရှင်က တရားတော်များ ဟောကြားတော်မူ ပြီး ဆံတော်များကို ပူဇော်ရန် ပေး ခဲ့သဖြင့် လက်ခံပြီး နေရပ်သို့ပြန်လာ ပါ၏။ ထိုဆံတော်များကို ဋ္ဌာပနာ တော်မူ၍ မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၃ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ရွှေ တိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို တည် တော်မူခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိပါ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘုရား အဖြစ်ရောက်တော်မူပြီး ၄၅ ဝါ ပတ်လုံး တရားတော်များ ဟောကြား ကာ သတ္တဝါဝေနေယျတို့ကို ကယ် ချွတ်တော်မူခဲ့ပါ၏။ ထိုဘုရားအဖြစ် ရတော်မူသော ၄၅ ဝါ၊ (၄၅)နှစ်နှင့် သာသနာနှစ် ၂၅၅၅ ကို ပေါင်း သော် နှစ်ပေါင်း ၂၆ဝဝ ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကရ တည်ရှိနေပါသော လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူသည်မှ ယခုတိုင် မြဲမြံခိုင်ခိုင် တည်ရှိနေသော မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ မော်ကွန်း သက်သေကြီးလည်း ဖြစ်ပါ၏။ ၁၇၇၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်၊ (တပေါင်းလပြည့်နေ့)က ထီးတော် တင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ကျည်းကန် ရှင်ကြီး ရှင်နန္ဒဓဇက ရွှေတိဂုံ မေတ္တာစာကို ဤသို့ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါ၏။ "ပန်းမျိုးစုံ စီသီကာကုံးလို့ ထီး တံခွန်တွေ၊ အဝေဆုံးနှင့်၊ ငါးကြော် သားကြော် အဆီတုံးနှင့်၊ ဆွမ်းသင် ပုတ်တော်ကိုယ်တော်သုံးဖို့၊ ဖက်စိမ်း ထွန့်ချွန် ယဉ်ရုံဖုံးလို့၊ အပျိုအအို တပြုံးပြုံးမို့၊ အမြိုင်မြိုင်ဆံတော် ရင်းမှာ၊ အပြိုင်ပြိုင်လှူဖွယ်ခင်းလို့ ပလုတ်တုတ်သံ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းနှင့်၊ ဆိုင်းသံ စည်သံညံညံအုန်းစ။ ပရိ သတ်တွေခြိမ့်ခြိမ့်ရုံးလို့"ဟု ဖွဲ့ဆို ခဲ့သည်။ ၁၈၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အနောက် နန်းမိဖုရား မမြကလေးက ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး အနောက်စောင်း တန်းဆောက်လုပ်ရန် သစ်ပျဉ်ကံ ကျွေး လက်ခငွေများ ဆက်သရာ မိဖုရားခေါင်ကြီးနှင့်အတူ သာယာ ဝတီမင်းကြီးသည် ရေစက်သွန်းချ တော်မူခဲ့ပါ၏။
ထိုအချိန်က နန်းမ တော် မမြလေးက သီကုံးခဲ့လေ သလောဟု ထင်ရသည့် သဖြန် တစ်ပုဒ်တွင်-
သည်တောင်မှာ ရွှေရောင်ဖုန်း တယ်
ဟု အဆုံးသတ်ထားသော လွမ်းဖွယ် ရွှေတိဂုံကို သမိုင်းတွင် မှတ်မှတ်သားသား ရှိခဲ့ရပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် မြန်မာမင်း အဆက်ဆက်က ရွှေတိဂုံစေတီ တော်မြတ်ကြီးအား ပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပုံ၊ ထီးတော်များ တင်လှူခဲ့ကြပုံ၊ အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ သော ငလျင်ကြီးများကြောင့် ပြို ကျပျက်စီးခဲ့ရာတွင် မင်းနှင့် ပြည်သူ၊ ညီတူစိတ်ထား သဒ္ဓါများ၍ ပြန် လည် မွမ်းမံ လှူဒါန်းခဲ့ကြပုံများကို သမိုင်းမှတ်တမ်း အစောင်စောင်တွင် တွေ့မြင်ဖတ်ရှု သိရှိခဲ့ရပါ၏။
မြန်မာလူမျိုးတို့သည် သမိုင်း ဆိုင်ရာ အထောက်အထား အချက် အလက်တို့ကို မှတ်သား စုဆောင်း ရာတွင် အားနည်းလှသည့်ဟု အနောက်နိုင်ငံသားတို့ကဆိုခဲ့သည် ကိုလည်း တွေ့ရပါ၏။ သို့သော် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အထောက်အထားများနှင့် ညှိနှိုင်းထောက်ဆ၍ ပြုစုခဲ့သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ အမြောက် အမြားရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါ ၏။
ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းများအလိုအရ ဗုဒ္ဓ နှင့် ကုန်သည်နှစ်ဦး တွေ့ဆုံခန်းကို 'ဝိနယပိဋက'တွင် တွေ့ရပါ၏။ (ဆံ တော်စွန့်လိုက်သည်ဟုတော့ မတွေ့ ရပါ)သို့သော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်အကြာ အေဒီ ၁၅ ရာစုထိုး၊ မွန်ကျောက်စာများနှင့် အဋ္ဌကထာ များတွင်မူ ဆံတော်စွန့်လှူလိုက် ကြောင်း ဖော်ပြချက်များကို တွေ့ရပါ ၏။
မည်သို့ဆိုစေ အေဒီ ၃ ရာစု တွင် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း နဂရ်ဇဏိ ကောဏ္ဍကျောက်စာနှင့် ယင်းအေဒီ ၃ ရာစုမှာပင် ရေးသားခဲ့သော 'စန်ဒုဖူ' တရုတ်မှတ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒသည် ထိုရာစုနှစ် များမှာပင် သာသနာ ထွန်းကားနေပြီဖြစ်သည်ကို တွေ့နိုင် ပါ၏။
ယခုဖူးတွေ့နေရသော ရွှေတိ ဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဥာဏ် တော်မှာ ၃၂၆ ပေမြင့်ပါ၏။ သို့ သော် မူလရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အမြင့်မှာ ၆၆ ပေမျှသာဖြစ်ပါ၏။ ယခု ဖူးတွေ့ရသော စေတီပုံမျိုး လည်းမဟုတ်ဘဲ အေဒီ ၅ ရာစုမှ ၁၅ ရာစုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်စားခဲ့သော တိုက်စေတီပုံဖြစ် ခဲ့ပါ၏။ အေဒီ ၁၄ ရာစုတွင် ယင်း စေတီမှာ ပြိုပျက်နေပြီဖြစ်ပါ၏။ ရွှေ တိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့် ပတ်သက် သော ရှေးအကျဆုံး အထောက်အ ထားအဖြစ် အေဒီ ၁၅ ရာစုနှောင်း ပိုင်းက ရေးထိုးခဲ့သည့် ပါဠိ၊ မွန်၊ မြန်မာကျောက်စာများကို တွေ့ရပြီး ယင်းကျောက်စာများကို ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး အရှေ့ဘက်စောင်း တန်း၏မြောက်ဘက်အလယ်ပစ္စယံ တွင် တွေ့နိုင်ပါ၏။ ထိုကျောက်စာ များအရ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ Óာဏ်တော်အမြင့်မှာ ဆင်ဖြူရှင်မင်း လက်ထက်တွင် စေတီအိမ်ပြာသာဒ် ကို ပယ်၍အတောင် ၄ဝ မြင့်သော စေတီကိုတည်ခဲ့ပုံ၊ သက္ကရာဇ် ၈၃၁ တွင် ဗညားဗ ရူး၏ ညီဝမ်းကွဲ ဓမ္မဇေ တြလောကျနာထ ရာဇဓိရာဇ်ဘွဲ့ခံ ဗညားကျန်းတော မင်းပြုသောအခါ မယ်တော်ဝိဟာရ ဒေဝီမိဖုရားကြီး သည် အမြင့် ပေ ၃၂ဝအထိ တည် ထားပြီးဖြစ်၍ ဗညားကျန်းတောက စေတီတော်ကို အင်္ဂတေကိုင်ပြီး ထီး တော်တင်ခဲ့ပုံများကို သမိုင်းမှတ်တမ်း များတွင် တွေ့ရပါသည်။
ရွှေတိဂုံသည် မြန်မာတို့၏ ကိုး ကွယ်ယုံကြည်ဆည်းကပ်ရာဖြစ်သ လို မြန်မာတို့၏ပထဝီသမိုင်း (င လျင်အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပုံ) မြန်မာတို့ ၏ နိုင်ငံရေးသမိုင်း၊ မြန်မာမင်းတို့ ၏ အောင်မြေနင်းပုံ၊ မြန်မာတို့၏ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲပုံများတွင် အထိကရအဓိကအခန်းမှ ပါဝင်နေ သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါ၏။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၇၉ဝ (အေဒီ ၁၄၃၆) ဗညားရန်ခိုက်မင်း၊ အေဒီ ၁၅၆၄ (ဘုရင့်နောင်မင်း)၊ အေဒီ ၁၆ဝ၈၊ အေဒီ ၁၆၁၆ (ဗညားဒလမင်း)၊ အေဒီ ၁၆၂ဝ နိုဝင်ဘာ (အနောက် ဘက်လွန်မင်း)၊ အေဒီ ၁၆၄၄ (သာ လွန်မင်း)၊ အေဒီ ၁၆၅၂ (ပင်းတလဲ မင်း)၊ အေဒီ ၁၆၆၂ (ပြည်မင်း)၊ အေဒီ ၁၆၆၄၊ အေဒီ ၁၆၇၉ (မင်းရဲ ကျော်ထင်)၊ အေဒီ ၁၉၆၈ ဇွန်လ ၁၃ (ဆင်ဖြူရှင်မင်း)၊ ၁၉၃ဝ မေလ ၅ ရက်နှင့် ၁၉၇ဝ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက်တို့တွင် ငလျင်များလှုပ်ခတ်ခဲ့ ရာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအား ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့သဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံ ခြင်း၊ ထီးတော်တင်ခြင်း၊ စိန်ဖူး တော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်များ ပြု ပြင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရပါ၏။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး သည် သင်္ခါရနှင့်သဘာဝ ဓမ္မတရား အရ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မီးလောင် ကျွမ်းခြင်းတို့ကိုလည်း ခံခဲ့ရပါ၏။ ၁၉၃၁ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့ တွင် အနောက်ဘက်စောင်းတန်းမှ စ၍ လောင်ခဲ့သော မီးသည် စေတီ တော်ကြီးနှင့်အရှေ့ဘက်စောင်းတန်း အထိ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ သမိုင်းတန်ဖိုးများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ၏။ သို့သော်လည်း သဘာဝတရား ကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခံကာ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်း တော်မြတ်၌ ငွါးငွါးစွင့်စွင့် တင့်တင့် တယ်တယ်သပ္ပာယ်လှစွာရွှေအဆင်း ဖြင့် ပဝင်းလျက်ရှိတော်မူသော ရွှေတိ ဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် နှစ် ၂၆ဝဝ တိုင်တိုင်တိုး၍တိုး၍သာ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားဖွယ်ဖူးတွေ့ရပါ၏။
၂၆ဝဝ ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့်နေ့ (၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်)သည် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုနေ့ မ တိုင်မီ ၁၅ ရက်(ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်)မှ စတင်၍ ရွှေတိဂုံစေတီ တော်မြတ်ကြီးတွင် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ နှစ် ၂၆ဝဝ ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ကြီးကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၏။ ပွဲတော် ကြီးတွင် သံဃာတော် အပါး ၂၆ဝဝ ဖြင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအား ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်ပြီး သံဃာတော်အပါး ၂၆ဝဝ အား ဆွမ်း ဆန်တော်များ လောင်းလှူခြင်း၊ ပွဲ တော်ကာလအတွင်း ဓမ္မဒေသနာ တော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်များ၊ ဆွမ်းပန်းရေ ချမ်း၊ ဆီမီးကပ်လှူပူဇော်ခြင်း၊ ရိုးရာ ထမနဲပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြမည် ဖြစ်ပါ၏။ ပွဲတော်ကာလအတွင်း သိဂုင်္တ္တ ရကုန်းတော်ကြီးတွင် ဖူးပွင့်ဝေဆာ နေသော ပန်းပင်ပေါင်း ၅၄ဝဝဝဝ ကို စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းလျက် ကုန်း တော်တစ်ခုလုံး ပန်းပေါင်းစုံဝေဆာ ပွင့်ဖူးသည့် ပန်းပင်လယ်ကြီးပမာ ပန်းပူဇော်ပွဲကြီးကိုလည်း ကျင်းပ မည်ဖြစ်ရာ ရွှေတိဂုံစေတီတော် သမိုင်းကာလတစ်လျှောက်တွင် အ ထူးခြားဆုံး ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါ၏။
နှစ် 2600 ပြည့် မြတ်ရွှေတိဂုံ
21:55 Myanmar Express Group No comments
1955 ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ် " ခရုရှက် " မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်စဉ် ရွေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို လက်အုပ်ချီကန်တော့ရာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက " ခင်ဗျားဟာ ကွန်မြူနစ်လုပ်နေပြီး ဘုရားရှိခိုးရသလားဗျ "
မစ္စတာ အခုရှက်က - " ဗုဒ္ဓကို ကျွန်တော်တို့ အလေးပြုရမယ်ဗျ ၊ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ မိမိ ၀ါဒကို နှစ်ပေါင်း (2500) ကျော် တည်တံ့အောင် ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့စွမ်း ပကားဟာ ကျွန်တော်တို့ လူ့သမိုင်းအရ ဘယ်လူသားကမှ လိုက်မမှီသေးဘူး ။ ခုကျွန်တော်တို့ စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ လူဘယ်နှစ်သန်းလောက်ကို နောက်လိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြသလဲ ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ တည်တံ့အောင်လုပ်နိုင်မလဲ ဗုဒ္ဓလောက်ကြီး မြတ်တဲ့ စည်းရုံးရေးမှူးမျိုးရှိနိုင်ပါ့ မလား ………………..
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့ စည်းရုံးရေး စွမ်းအင်ကို အလေးပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့ ဓလေ့အတိုင်း ရှိခိုးတာဗျ ။ ဒါဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာ "
(ဆိုဗီယက် ၀န်ကြီးချုပ် ခရုရှက် )
ဖတ်ထားဘူးတာ ကြာပြီ ....
ပိုစ့်လေး ရေးခဲ့တာလဲ ကြာပါပေါ့ ။
အခုထပ်ရေးရခြင်းအကြောင်းက သာသာနာနှစ် 2600 ရှိခဲ့ပြီလေ ။
သုံးလောက ထွဋ်ထား ရှင်းတော်မြတ် ဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် ၀ါတော်(၄၅)၀ါ အားပေါင်း၍
လောက တွင်ရှိကြကုန်သော လူအများ အကျိုးရှိစေခြင်သောငှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၌ ထာပနာထားသော
ဆံတော်မြတ် နှစ်(၂၆၀၀)ပြည့် နှစ်အားရည်စူး၍ ပူဇော်သော
ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သက်တမ်း ( 100 ) တမ်းမှာ အခု
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေကြရတယ် ......
သို့သော် 100 ထိ လူဘယ်လောက်တောင် နေထိုင်ကြရလို့လဲ
ဒါကြောင့် တိုတောင်းလှတဲ့ ဘူဘ၀ လေးမှာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲေ၇ွှတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏
နှစ်(၂၆၀၀) ပြည့်နှစ် နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ ဖူးမျှော်ခွင့်ရရှိသည့် အခိုက်
ပူဇော်လှူဒါန်း ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားများနိုင်ရန် အတွက်
(၂၅.၂.၂၀၁၂ ) စနေနေ့ တွင် သံဃာတော် ၂၆၀၀ပါး ဖြင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အား ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာ တင်ပြီး
သံဃာတော် ၂၆၀၀ပါး ဆွမ်းဆန်တော်များ လောင်းလှုခြင်း။
၂၂.၂.၂၀၁၂ မှ ၇.၃.၂၀၁၂ ထိ ပွဲတော်ကာလ အတွင်း
ဆွမ်း ၊ ပန်း ၊ ရေချမ်း နှင့် ဆီမီးကပ်လှူခြင်း။
ဖူးပွင့်နေသော ပန်းပင်များ လှူဒါန်းခြင်း။
သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့် မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှ ဒါန ကုသိုလ် ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်များကို
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ် 2600 ပြည့်မှာ ပြုလုပ်ကြဖို့ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ပြီး နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ ..... ။
လူလိမ်တွေ ပွေလီရှုပ် တန့်ကြည်တောင်ဇာတ်ထုတ်
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာက တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အမူအရာပေါင်းစုံ၊ တရားထိုင်ရင်း ငို ရယ်နေတာတွေ၊ ကနေတာတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ခွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေတာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။
တချို့လည်း ကြည့်ပြီးဖြစ်ကြသလို မကြည့်ရသေး တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရှိနေအုံးမည် ထင်ပါသည်။
တချို့ကြည့်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်များက ဒါကိုကြည့်ပြီး ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်အဖြစ် လာရောက်
မေးမြန်းကြပါသည်။ တရားထိုင်တဲ့အခါ ဤခွေထဲကအတိုင်း တကယ်ဖြစ်သလား စသည်
စသည်ဖြင့် မေးလာကြပါသည်။ တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ ငိုမှု့ ရယ်မှု့တွေ အနည်းအကျဉ်းတော့ ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ ပီတိ ကြောင့် မျက်ရည်ကြခြင်း၊ ငိုခြင်း စသည်တို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီခွေထဲကအတိုင်း ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ငိုတာမျိုးတွေတော့ မရှိပါဘူး။
မဟာစည်၊ မိုးကုတ် စတဲ့ နာမည်ကြီး ရိပ်သာတွေမှာ ဤခွေထဲကအတိုင်း ဖြစ်သလားဆိုတာ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် သွားရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ယခု အခွေသည် ပြင်ပမှ တစုံတစ်ယောက်က ရိုက်ထားသောခွေမဟုတ်ပါ။ တန့်ကြည်ရိပ်သာက
သူတို့ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးပြီးတော့ ဖြန့်ချီတဲ့ခွေဖြစ်ပါသည်။ ဤခွေထဲမှာ ပါသော ကနေတာတွေ ခွေးလိုအမူအရာ၊ မြွေလိုအမူအရာ စတာတွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာ ၀ဋ်ကြွေးပေးဆပ်တယ်၊ တရားထူးတက်တယ် စသည်ဖြင့် တန့်ကြည်တောင် ဆရာတော် ဦးသောမဗုဒ္ဓိ
ကိုယ်တိုင် ဟောပြော၍ လူထုပရိတ်သတ်ကို စည်းရုံးထားတဲ့ ခွေဖြစ်ပါတယ်။
လူစင်စစ်က လူစိတ်ပျောက်ပြီး တိရိစ္ဆာန်အမူအရာမျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက တိရိစ္ဆာန်
တရားပဲဖြစ်မှာပါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားမဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာကို ဖျက်ဆီးထားတဲ့အတွက် 1999 ခုနှစ်မှာ မန္တလေး၊
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (၀ီရသူ) မစိုးရိမ်မှ ထေရ၀ါဒ တိုက်ပွဲ
ဟူသော စာအုပ်ဖြင့် ထိုဝါဒဆိုးကြီးကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် 24.12.2000
ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ ရှေ့မှောက်မှာ ၀န်ခံကတိပြု
လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာကို ပိတ်သိမ်းသွားပါတယ်။
သို့ပါသော်လည်း ယခုအခါ တန့်ကြည်တောင် သည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်
ပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက် ယခုအခွေအား အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာ ရှိတဲ့မြို့များကတော့
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာ (ပုဂံ၊ ညောင်ဦး) ပင်မရိပ်သာ
တန့်ကြည်တောင်ရိပ်သာ (မန္တလေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်)
တန့်ကြည်တောင်ရိပ်သာ (ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာဒုံ) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ၀ါဒဆိုးကြီးအောက်သို့ မသက်ရောက်မိစေရန်
Prev: မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု ပြုနိုင်ပါစေ
Next: ချီးမွမ်းကဲ့ရဲ့ မငဲ့ကွက်နဲ့
အာနာပါန သတိပဌာန် ရှုမှတ်နည်း အကျဉ်း
အာနာပါနဿတိသည် ကာယာနုပဿနာသတိပဌာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အာနာပါနသည် ထွက်လေ၀င်လေဆိုသည့် ၀ါယောဓါတ် ခေါင်းဆောင်သည် ဓါတ်တရားတွေ စုပေါင်းထားသော ကာယကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲသွားအောင် အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ရှုရသော သတိပဌာန်ကို ခေါ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထား၍ သတိကို နှာခေါင်းရှည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလျှင် နှာသီးဝ၊ နှာခေါင်းတိုလျှင် အထက်နုတ်ခမ်း မှာထားပါ။ ထွက်လေ၀င်လေကို သတိနဲ့ ၀င်၊ ထွက်စေရမည်။
၁) ထွက်လေ၀င်လေတစ်စုံကို ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ ဟု မှတ်တဲ့နည်း။
၂) အနုပတ္တာနည်း- နေရာတစ်ခုခုမှာပဲ သတိကိုထားပါ။ ထွက်လေ၀င်လေကို စ၊လယ်၊ဆုံးသိအောင်လုပ်တဲ့နည်း။
၃) ဌာပနာနည်း- ထိတဲ့နေရာမှာ ထိထိနေတာသိအောင်လုပ်တဲ့နည်း။
ခ) ကြာတာ၊ မြန်တာသိအောင်လုပ်ပါ။ တိုတိုလား၊ ရှည်ရှည်လား သိအောင် လုပ်ရမည်။
ဂ) ပြင်းထန်သလား၊ နူးညံ့သလား သိအောင်လုပ်ရမည်။
ထွက်လေ ၀င်လေသည် စိတ္တဇ၀ါယောဖြစ်လို့ စိတ်ပေါ်မူတည်သည်။ စိတ်တွေ ကြမ်းလျှင် ထွက်လေ၀င်လေက ကြမ်းသည်။ နီဝရဏ တရား ၅ ပါး မကင်းလျှင် ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကပူလောင်တဲ့သဘောရှိပါသည်။ ၄င်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့စိတ်က ကြမ်းပါသည်။ နီဝရဏဆိုသည်မှာ-
၄) ပျံ့လွင့်တာ၊ ပူပန်တဲ့စိတ်
ဃ)နီဝရဏ ကင်း၍ စိတ်တွေသိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါ ၀င်လေထွက်လေသည် နူးညံ့လာပါသည်။ သိပ်ပြီး သိမ်မွေ့လာရင် ထွက်လေ၀င်လေ ရှိမှရှိသေးလားလို့ ထင်ရတတ်ပါသည်။ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များမှသာ ထွက်လေ၀င်လေ ချုပ်ပါသည်-
၁) အမိဝမ်းထဲက ကလေး
င) ၀ီရိယစိုက်ပြီးရှုလျှင် သိမ်မွေ့နေသော ၀င်လေထွက်လေကို တွေ့လာလိမ့်မည်။ စိတ်တွေကြည်လာတတ်သည်။ အဖြူရောင် ညစ်ထေးထေး နမိတ် စပေါ်လာမည်။ ပေါ်လာကစတွင် ၀င်လေထွက်လေက သတ်သတ် နမိတ်က သတ်သတ် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ယင်းသို့ နမိတ်ပေါ်လာလျှင် စိတ်ကပေါ်လာသော နိမိတ်ပေါ်ရောက်သွားတတ်သည်။ နမိတ်ကိုဆက်ရှုရမည်။ နမိတ် ပျောက်သွားလျှင် ဘာဝနာစိတ်ကို ၀င်လေထွက်ပေါ်ပြန်တင်ရမည်။ ဘာဝနာစိတ်အားကောင်းလျှင် နမိတ်နှင့် ၀င်လေထွက်လေတို့ တစ်ထပ်တည်း ကျလာလိမ့်မည်။ ယင်းနောက်မှာ နှာခေါင်းထဲက လှုပ်ရှားနေသော မီးခိုးတန်းလို၊ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ၀ါဂွမ်းဆိုင်လိုအစတွင် ဖြစ်မည်။ ဘာဝနာစိတ် ခိုင်ခံ့လာသောအခါ ဖြူဖွေး ကြည်လင်တောက်ပသော မီးချောင်းလို ကြည်လို နက္ခတ်လို ပုလဲလုံး ရွဲလုံးလို ပေါ်လာ တတ်သည်။ ဈာန်လမ်းသွားချင်လျှင် ပေါ်လာသော နမိတ်ကို မလွတ်တန်းရှုဖို့လိုပါသည်။ လှုပ်နေတဲ့နမိတ်က ငြိမ်သွားသည် အထိ အာရုံပြုပွါများလျှင် ဈာန်စခန်းသို့ ရောက်ပြီ။ ၄င်းဈာန်ကလည်း နီဝါရဏ ၅ ပါးကို လောင်ကျွှမ်း သွားစေပါသည်။ နမိတ် ၃ မျိုးမှာ-
၁) မူလ ၀င်လေထွက်လေက ပရိကမ္မနမိတ်
၂) မီးခိုးတန်းလို ၀ါဂွမ်းဆိုင်လို အစရှိတဲ့ လှုပ်ရှားပြီးနေတဲ့နမိတ်က ဥဂ္ဂဟနမိတ်
၃) ကြည်လင်တောက်ပပြီး ငြိမ်၍ပေါ်လာတာက ပဋိဘာဂနမိတ်
ဈာန်မှာ အင်္ဂါ ၅ ပါး ရှိသည်။
၁) စိတ်ကို နမိတ်ပေါ် မရောက်ရောက်အောင် တင်ပေးရတဲ့ ၀ိတက်
၂) ထိုနမိတ်ကို အဆက်မပြတ် ဆင်ခြင်နေတဲ့ သုံးသပ်နေတဲ့ ၀ိစာရ
၃) ၀ိစာရနှင့် နမိတ်ကို ဆင်ခြင်ပါများတော့ ပွတ်ပါများရင် အရောင်တလက်လက်ထွက်လာသော ရွှေပုထိမ်သည်ရဲ့ လက်ဝတ်ရတနာများလို လှုပ်ရှားနေတဲ့ နမိတ်က ငြိမ်ပြီး ကြည်လင်လာသည်။ ထိုနမိတ်ကို နှစ်သက်တဲ့ သိမ့်ကနဲ ငြိမ့်ကနဲ ခံစားတတ်တဲ့ ပီတိ
၄) အေးချမ်းတဲ့သဘော ပဿဒ္ဒိ၊ စိတ်တွေလဲ အေးချမ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်လဲ အေးချမ်းလာသည်။ ငြောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းမရှိ။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို
အောက်က မြောက်ပင့်လိုက်သလို ပေါ့နေသလို ခံစားရသည့် လဟုတာ။ အောက်မှာထိနေတယ်လို့ မထင်ရ။ နတ်စည်းစိမ်တမျှဟု ဆိုပါသည်။
၅) နောက်ဆုံး စိတ်က တည်ငြိမ်သွားတဲ့ ဧကဂ္ဂတာ။ သမာဓိရသွားပါပြီ။ ပထမဈာန်ဟု ခေါ်သည်။ စိတ်က နီဝရဏလွတ်လို တက်ကြွလန်းဆန်း အေးချမ်းနေပါတယ်။
ဤနေရာတွင် ၀ိပဿနာမရှုလိုသေးပါက ၀ိတက် ၀ိစာရကိုပယ်လျှင် ဒုတိယဈာန်၊ ပီတိကိုပယ်လျှင် တတိယဈာန်၊ သုခကိုပယ်လျှင် စတုထ္ထဈာန်အထိ တက်သွားနိုင်သည်။ ဈာန်စခန်းသွားရင် ဉာဏ်မလိုသေးပါ။ ရှုရုံပဲရှုနေရင်း တက်သွား ပါသည်။ ပထမဈာန်ရပြီး ၀င်လေထွက်လေဆိုသော တွန်းကန်လှုပ်ရှား တတ်သည့် ၀ါယောဓါတ်ဖြစ်သည့် ရူပ်ကိုရှုရင် ကယာနုပဿနာ။ ပီတိ၊ သုခ ဆိုသည့် စေတသိတ်များကိုရှုရင် ဝေဒနာနုပဿနာ။ ကြည်လင်နေသည်ကို သိနေသော စိတ်ကိုရှုရင် စိတ္တာနုပဿနာ။ ထိုစိတ် စေတသိတ်နှင့် ရုပ်များ မမြဲဘူးဆိုသည့် အနိစ္စသဘော၊ ကုန်ပျောက်တတ်သည်ဆိုသည့် ၀ိရာဂသဘော (တက်မက်စရာမရှိ)၊ ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးတတ်သည်ဆိုသည့် နိရောဓ (ခိုင်မြဲသည်ဟု မယူဆ)၊ စွန့်ပစ်ရမည် ဆိုသည့် ပဋိနိသေကသဘော၊ အချက် ၄ ချက် ပါသော ဓမ္မာနုပဿနာ။ ယင်းသို့ သုံးသပ်သောဉာဏ်က သမ္မသနဉာဏ်ရဲ့ အစဖြစ်ပါသည်။
ထွက်လေ၀င်လေက ရုပ်၊ ပီတိပဿဒ္ဒိ ခံစားမှု ဝေဒနာသည် စေတသိတ်၊ ချမ်းသာမှုကို သိနေသည့် စိတ်သည် ၀ိဉာဏ်၊ ယင်းစိတ်စေတသိတ်ရုပ်များကို ပိုင်းပိုင်းခြားခြား သိလာခဲ့သောဉာဏ်ကို နာမရူပပဋိစ္ဆေဒဉာဏ်။ သက္ကာယဒိဌိ ကင်းသွားပါပြီ။ ထိုနာမ်ရုပ်နှစ်ပါးသည် အ၀ိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ကံဆိုသော ဝေးသောအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။ ထွက်လေ၀င်လေ တည်းဟူသော ၀ါယောရုပ်၏ အနီးဆုံးအကြောင်းမှာ စိတ်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းနှင့် အကျိုးကို သိမ်းဆည်းတတ်သည့်ဉာဏ်သည် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့အကြောင်းအကျိုးကြောင့် ဖြစ်နေသော ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၏ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တကို ဓမ္မာနုပဿနာသတိပဌာန်နှင့် ၀ိပဿနာရှုလျှင် သမ္မသနဉာဏ် ဖြစ်ပြီ။ ၄င်းရုပ်နာမ်များ၏ ဖြစ်လာတာပျက်လာတာကိုမြင်သော ဉာဏ်က ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် ဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာတာတွေ့လျှင် ဥစ္ဆေဒဒိဌိပြုတ်ပြီး ပျက်တာတွေ့လာသော် မြဲသည်ဆိုသော သဿတဒိဌိ ပြုတ်ပါသည်။ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းတွင် ပျက်ခြင်းက ကြောက်စရာကောင်းသည့် သဘောဆောင်လို့ ဉာဏ်က ပျက်သည့်ဘက်ကိုပဲ ဒလစပ်ရှု သွားပါသည်။ အပျက်ကို သုံးသပ်ခြင်းက ဘင်္ဂဉာဏ် ဖြစ် ပါသည်။ ၀ါယောရုပ်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝေဒနာတစ်လုံးကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ကြည်လင်နေသော စိတ်ကလေး တစ်လုံးကိုဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ပျက်သွားနေသည်ကို မြင်သောအခါ ကြောက်စရာ ဆိုသည့် သံဝေဂဉာဏ် ဘယဉာဏ် ပေါ်လာပါသည်။ ထိုပျောက်ပျက်နေသော ခန္ဓာက အားကိုးစရာမဟုတ်ဟု သိသောဉာဏ်ဖြစ်သည့် အာဒီန၀ဉာဏ် ဖြစ်လာစေပါသည်။ ယင်းနောက်တွင် ငြီးငွေ့သော နိဗ္ဗိဒါဉာဏ် ပေါ်ပါသည်။ ထိုသို့ မလိုချင်ပဲ ရှုမှတ်နေရတာကို လွတ်ချင်သော မုဉ္စိတုကမျတာဉာဏ် ပေါ်လာပါသည်။
သို့သော် ရေနစ်မှာကြောက်၍ ခွေးသေကောင် ပုပ်ကို အတင်းဖက်တွယ်ထားသူကဲသို့ မလွှတ်ပဲ ဤသင်္ခတကိုပင် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဟု ဘာဝနာစိတ်ဖြင့် ဖိပြီးရှုမှတ်နေသော ပဋိသင်္ခါဉာဏ် ဆက်ဖြစ် လာပါသည်။ ယင်းအခိုက်တွင် သင်္ခတတရားကို သုခ၊ ဒုက္ခသောမနဿမပါသော ဥပက္ခာဝေဒနာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ၄င်းဉာဏ်ကို သင်္ခါရုပက္ခာဉာဏ် ဟု ခေါ်ပါသည်။ ထို့နောက်မှာ မဂ်ဖြစ်ပေါ်ရန် ကျေးဇူးပြုသည့် အနုလောမဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ ဆက်လက်၍ အထူးကြောင့်ကြမစိုက်ရပဲ ဂေါတြဘုဉာဏ် ပေါ်လာပါသည်။ ထိုဉာဏ်က သင်္ခတ အာရုံကို မယူတော့ပဲ အသင်္ခတကို မျော်ကြည့်သည့်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနောက်တွင် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ် အစဉ်အတိုင်း ပေါ်လာပါတော့သည်။ ထိုနောက် ချုပ်ပျာက်ခဲ့ပုံ ပယ်ပြီးကိလေသများကို ပြန်ဆင်ခြင်သည့် ပစ္စ၀က္ခဏာဉာဏ် ပေါ်လာပါသည်။ အာနာပါနသတိပဌာန်သည် သတိပဌာန်လေးပါး ပြည့်စုံသည့်အတွက် ဗောဇ္ဈင် ၇ ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(ဆရာတော် အရှင်ဉာဏိသရ ဟောကြားသော အာနပါနသတိပဌာန်တရားထဲမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ ရုပ်ထုတွေ
၁။ Spring Temple Buddha ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အမြဲတမ်းလာကြတဲ့ အမြင့် (၁၂၈ )မီတာရှိတဲ့Vairocana ဗုဒ္ဓလို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတဃ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ( ၂၅ )မီတာမြောက်မှာ Jiuhua တောင်ကြီးရှိပြီး ဘာသာရေးရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအနေဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတဃ်။
၂။ Laykun Setkyar Statue
ဒုတိဃအမြင့်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကလည်း ဗုဒ္ဓ ကို ကိုဃ်စားပြုထားတာပါပဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရှိကာ လှပသပ္ပာဃ်စွာ တည်ရှိနေပြီး ချီးကျူးစရာကောင်းလှတဲ့ဗိသုကာပညာရပ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး (၁၁၆)မီတာမြင့် မားပါတဃ်။ ရုပ်ပွားတော်ပာာ ဒါတွေမပါနဲ့ ကြည့် ရင်တောင်မှာ လှပသပ္ပာဃ်နေပါတဃ်။ လေးကွန်းစတြာလို့ အမည်ရပြီး (၂၀၀၈)ခုနှစ်တုန်းကပဲ တည်ဆောက်တာပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတဃ်။ဒီရုပ်ပွားတော်ကို ဗုဒ္ဓကိုဃုံကြည်ကိုးကွဃ်ဆည်း ကပ်နေသူတွေကနေအလေး သမှုပြုမှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတဃ်။
၃။ Ushiku Daibutsu
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေ အာရှကို တကဃ်လေးစားဖို့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိနေပါပြီဗျာ ။ တတိဃအမြင့်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကလည်း အာရှတိုက်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာတည်ရှိတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒါပာာလည်း ဗုဒ္ဓကို ကိုဃ်စားပြုထားတာဖြစ်ပါတခ်။ ကြီးမားလှတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးပာာ Ushiku လို့ အမည်ရပြီး ( ၁၁၀)မီတာမြင့်မားပါတဃ်။ (၄,၀၀၀ )တန် အလေးချိန်ရှိပြီး အပြင်မှာတကဃ် မတွေ့ ဘဲနဲ့ တော့ ဃုံကြမှာမပာုတ်ပါဘူး ။ ဘဃ်လောက် အရွဃ်အစားကြီးတဃ်ဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့် လိုက်ပါ ပန်းပုလက်ရာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဦးခေါင်းတော်ပာာ အမေရိကန် ၊ နဃူးဃောက်မြို့ ကလေဘာတီရုပ်ထုရဲ့တစ်ဝက်လောက်ရှိပါတဃ်။
၄။Nanshan Haishang Guanyin
တရုတ်နိုင်ငံ ၊ Hainanကျွန်းမှာတည်ရှိပြီး Guanyin ရုပ်ထုတော်ကတော့ (၁၀၈)မီတာ အမြင့် ရှိပါတဃ်။ ကမ္ဘာ့ လှည့် ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါတော့ နတ်သမီးကို ကိုဃ်စားပြုထားတာဖြစ်ပါတဃ်။ Bodhisattva Guan Yin( ကွမ်ရင်မဃ်တော် )ပာာ ကရုဏာရှင်နတ်သမီးတစ်ဃောက်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရေးကြီးတဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးပါ ။ သူ့ ရဲ့ ရုပ်ထုတော် ဖွင့် ပွဲကို ဘုန်းကြီး(၁၀၈)ပါး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတဃ်။
၅။The statues of the emperors Yan and Huang
ဒီတစ်ခါလည်း တရုတ်ကို ပြန်ရောက်ပြန်ပါပြီ ။ တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ လူနှစ်ဃောက်ပာာ သူတို့ ရဲ့ ရုပ်ထုတွေကို ထုလုပ်ခြင်းခံရပြီး ဂုဏ်ပြုခံထားရပါတဃ်။ ရုပ်ထုပိုင်ရှင်တွေကတော့ တရုတ်အင်ပါဃာဘုရင် Yan နဲ့ Huangတို့ ပဲဖြစ်ပါတဃ်။ သူတို့ တွေပာာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင် တွေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားတွေကနေ သူ တို့ ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအမြင့်ဆုံးရုပ်ထုတွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ သူတို့ ရုပ်ထုတွေကို တည်ဆောက်ပြီး
ဂုဏ်ပြုထားကြပါတဃ်။ (၁၀၆)မီတာ အမြင့် ရှိပြီး ဒီအကြီးကြီးကို တည်ဆောက်တာပာာ နှစ်(၂၀)တောင်ကြာခဲ့ပါတဃ်။
ဒီရုပ်ထုတော်ကတော့ ဂျပန်က ကုမ္ပဏီတစ်ချို့ တွေကနေ အငြင်းအခုံဖြစ်ပွားကြပြီး အခွန်ဆောင်စရာမလိုတော့အောင် ဃတြာချေတဲ့အနေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတဃ်။ Sendai ၊ ဂျပန် မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက ဒီရုပ်ထုတော်ကြီးဆီကို သွားလည်မသွားကြဘဲ လေးစားသမှုလည်းမပြုကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေက Sendai Daikannonကို စိတ်ဝင်စားကြပြီး နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း အများကြီးလာကြပါတဃ်။ ရုပ်ထုတော်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးကိုဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး မြို့ ရဲ့ အံသြဖွဃ်ကောင်းအောင် လှတဲ့မြင်ကွင်းကို ကြည့် ရှုနိုင်ပါတဃ်။
၇။Peter the Great
ဒီရုပ်ထုကြီးကတော့ ရုရှား ၊ မော်စကိုမှာတည်ရှိပြီတော့ ရုရှားအင်ပါဃာဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပီတာကို ရည်ညွှန်းပါတဃ်။ဒီရုပ်ထုကြီးမှာ ရဃ်စရာကောင်းတဲ့သမိုင်းရှိပြီး ဆောက်လုပ်ထားပုံကတော့ မလှဘူးလို့ ပြောရပါလိမ့်မဃ်။ ဒီ(၉၆)မီတာရှိတဲ့ရုပ်ထုကြီးရဲ့ ဆောက်လုပ်သူ Tsereteliပာာ Christopher Columbusရဲ့အမှတ်တရ ရုပ်ထုအနေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဒါကြီးကို အမေရိကန် အစိုးရကိုရောင်းတော့ အမေရိကန်အစိုးရက ရုပ်ထုကြီးရဲ့ ဒီဇိုင်းကို မကြိုက်တာကြောင့်လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုလံဘတ်ရဲ့ ခေါင်းကြီးကို ရုရှားအင်ပါဃာ ဘုရင် ပီတာခေါင်းနဲ့ လဲပြီး ရုရှားကို ရောင်းခဲ့ရပါတဃ်။
၈။Great Buddha of Thailand
ဘုရားလာဖူးသူတွေရဲ့(၉၂)မီတာအမြင့်မှာရှိနေပြီး ကြီးမားလှတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပာာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတဃ်။ ရုပ်ပွားတော်ကြီးပြီးဖို့(၁၈)နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အခုဆို ဆောက်လုပ်တာပြီးဆုံးသွားတဲ့ ကြည်ညိုစရာကောင်းလှတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကို အပြည့်အ၀ဖူးမြော်လို့ ရပါပြီ။
၉။Ling Shan Grand Buddha
တရုတ်ကတော့ မြင့်မားလှတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေ ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကြီးမားလှတဲ့လို့ ဆိုရပါလိမ့်မဃ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တို့ ရဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လက်ဖ၀ါးဖြန့်ထားတဲ့ပုံစံ တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတဃ်။ ဒီကြီးမားလှတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပာာ Lingshan( လင်းရှန် ) ကောင်တီမှာတည်ရှိကာ (၈၈)မီတာမြင့်မားပြီး ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်တွေထဲမှာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတဃ်။
၁၀။Mother Motherland Calls ဒီသာမန်ထက်ကြီးလှပြီး ခန့် ညားလှတဲ့ရုပ်ထုကြီးပာာ ရုရှားနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး Stalingradစစ်ပွဲ( ဂျာမဏီကနေရုရှားကိုဒုတိဃကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကျူးကျော်ခြင်း ) အမှတ်တရအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတဃ်။ ဒီရုပ်ထုကြီး တည်ဆောက်တာပြီးဆုံးတဲ့ ၁၉၆၇မှာတော့ရုပ်ထုကြီးပာာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးရုပ်ထုကြီးပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာရှသားတွေကနေကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးရုပ်ထုတွေကို
စဆောက်လာကြတော့ ဒီ Mother Motherlandရုပ်ထုကြီးပာာ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးရာထူးကနေ ဆင်းပေးလိုက်ရပါတဃ် ။ အခုချိန်မှာတော့ (၈၈)မီတာမြင့်တဲ့Dai Kannon ပေါ်လာကတည်းက (၈၅)မီတာပဲရှိတဲ့ ရုရှားရုပ်ထုကြီးပာာ နံပါတ်(၁၁)နေရာကို ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတဃ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ဒီရုပ်ထုကြီးပာာ ပိုပြီးလှတဲ့အတွက် နံပါတ်(၁၀)ထဲမှာ ထည့်လိုက်တာပါ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ မပာုတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ် သတင်းများအတွက် : http://groups.google.com/group/mayanmardailymail/subscribe
Simple Views On My Land
မြန်မာ Blog များအားလုံး
မိန့်ခွန်း၊ ဥပဒေနှင့် ပြန်တမ်းများ
MIET တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ Forum
နေ့စဉ် မြန်မာ အီးမေးများ အဖွဲ့သို့ဝင်ရန် mayanmardailymail@googlegroups.com ကို အီးမေးပို့ပါ၊ ပြန်ထွက်ရန် mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို့ အီးမေးပို့ပါ။
http://groups.google.com/group/mayanmardailymail သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ဖတ်နိုင်ပြီး ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားရန် admin@mee-pya-tite.com ၊ forall85ster@gmail.com နှင့် simpleviews2010@googlemail.com များသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
စာမဖတ်သူအကန်းနဲ့တူ ၊ အကျိုးပေးကောင်းချင်လျှင် စာဖတ်ပါ ၊ ဘာကြောင့်စာဖတ်သင့်သလဲ ၊ အတွေးမှတ်စုများ (၂၇) ၊ Facebook Timeline ကိုဖျတ်ပစ်မယ် ၊ တစ်ပတ်အတွင်း Facebook ပေါ်မှ သူတပါးမသိစေလိုသော အချက်အလက် အားလုံး ရှင်းပါ ၊ ဆော့ဝဲလ် ပေါင်း 250 ကျော် ၊
အကျိုးပေးကောင်းချင်လျှင် စာဖတ်ပါ ၊
အတွေးမှတ်စုများ (၂၇) ၊
Facebook Timeline ကိုဖျတ်ပစ်မယ် ၊
တစ်ပတ်အတွင်း Facebook ပေါ်မှ သူတပါးမသိစေလိုသော အချက်အလက် အားလုံး ရှင်းပါ ၊
ဆော့ဝဲလ် ပေါင်း 150 ကျော် ၊
ဒီနေ့ကမျက်မမြင်ကောင်လေးတစ်ယောက် ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့ပါ။ စာသင်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုတခြားကျောင်းသားတွေက မြင်တော့
တအံ့တသြနဲ့ဆရာမကို " သူမှမျက်စိမမြင်ရတာ စာဘယ်လိုသင်ယူမှာလဲ " လို့မေးကြတယ်။" စာမဖတ်တဲ့သူသာ အကန်း ဖြစ်တယ်၊ ငါတို့ကျောင်းသားသစ်လေးက သူ့လက်နဲ့စာဖတ်လို့ရတယ်၊ သူ့မှာလက်နဲ့စမ်းပြီးဖတ်လို့ရအောင် စာလုံးတွေနဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိတယ် " လို့ဆရာမက ရှင်းပြတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့ အတန်းဖော်တွေက သူ့ကိုစကြနောက်ကြပြောင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့သူက ဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်ဘူး။ သူကဆရာမ သင်ပြတာကို တစ်ခါကြားရုံနဲ့ အလုံးစုံကိုမှတ်မိတယ်။ မကြာခင်မှာ အတန်းဖော်တွေက သူတို့အိမ်စာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ အစပြုပြီးမေးလာကြတယ်။ မျက်မမြင်ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့အားလက်ချိန်တွေကို စာဖတ်ခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်လွန်စေတယ်။ ဆရာမ ကလဲ မျက်မမြင်ဖတ်တဲ့စာတွေ များနိုင်သလောက်များများ ရေးပေးတယ်။ တခါတရံအသံထွက်ပြီးဖတ်ပြပေးတယ်။ ပြီးတော့အတူ တကွစာအကြောင်းဆွေးနွေးကြတယ်။
တစ်နေ့ အတန်းထဲမှာ ဆရာမစာသင်နေရင်းနဲ့ နှလုံးထဲကနာကြင်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားရပြီး သူ့ရဲ့ထိုင်ခုံပေါ်ကို ထိုင်ရက်သားဖြေးဖြေး လေးလဲကျသွားတယ်။ နာကြင်မှုကပျောက်မသွားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဆရာမက ကြိတ်မှိတ်ခံစားရင်း အတန်းချိန်ပြီးဆုံးတဲ့အထိ နေသွား တယ်။ ဒါကိုဘယ်သူမှ ဂရုမပြုမိကြဘူး။ ရုတ်တရက် မျက်မမြင်ကောင်လေးက ထပြီးငိုတယ်။ " ငါတို့ရဲ့ဆရာမကောင်းကောင်း နေမကောင်းဘူး၊ ငါတို့ဆရာဝန်ချက်ခြင်းခေါ်မှဖြစ်မယ် " လို့ပြောလိုက်တယ်။
ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာတက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေကြတယ်။ ဆရာဝန်ရောက်လာပြီး ဆရာမကိုလူနာတင်စင် ပေါ်တင်ပြီး ဆေးရုံကိုခေါ်သွားတယ်။ " မင်းကဆရာမနေမကောင်းဘူးလို့ ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ " လို့ကလေးတွေက မျက်စိမမြင် တဲ့ကောင်လေးကို တအံ့တသြ မေးကြတယ်။ " ဆရာမအသံတွေတုံနေတယ်၊ စာသင်နေရင်းနဲ့ စာပိုဒ်အလယ်မှာရပ်သွားပြီး ဆက်မတက်တော့ ငါသိလိုက်တာပေါ့ " ဒါနဲ့တစ်ယောက်က " ဒါဆို မင်းမြင်ရတာပေါ့ " လို့မေးလိုက်တယ်။ " ငါမမြင်ရပါဘူးကွာ၊ ဒါပေမဲ့ တွေးတောခံစားလို့ရတယ်၊ " " မင်းမမြင်ရပဲဘယ်လိုလုပ် ခံစားရတာလဲ " " စာအုပ်တွေက ခံစားနိုင်အောင် သင်ပေးခဲ့တာ ပေါ့ " လို့မျက်မမြင်ကောင်လေးက ရှင်းပြတယ်။ " မင်းတို့ဆရာမပြောပြတာ မှတ်မိလား၊ စာများများဖတ်တဲ့သူဟာ စဉ်းစားတွေး ခေါ်မြှော်မြင်ဥာဏ်ကြီးမားတယ် သူတစ်ပါးကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်တယ၊် ပညာရှိဖြစ်တယ်၊ ပညာရှိတွေးကြည့် ပြေးကြည့်တာ ထက်မှန်တယ် တဲ့၊ ဒါကြောင့်စာများများဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာ၊ စာမဖတ်ရင်သာအကန်းနဲ့တူတာ " လို့ပြောလိုက်တယ်။
What do books teach us by A.Lopatina & M. skrebtsova ကိုဆီလျှော်အောင်ပြန်ဆိုပါသည်။
ကမ္ဘာ့ပညာရပ်အားလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စာအုပ်များထဲတွင် ရှိကြသည်။ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ
အသစ်အသစ် ထွက်ပေါ်လာသော စာအုပ်များအားလုံးဖတ်နိုင်သည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် များများဖတ်နိုင်လျှင်
မှန်ကန်၍ အသုံး ၀င်သော အသိပညာများ တိုးပွားကြွယ်ဝလာမည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်များသည် မိတ်ဆွေကောင်းများ ဖြစ်ကြ၏။ သင့်အနေဖြင့် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော
နေ့မျိုး တွင် သင်၏ စိတ်ကြိုက်စာရေးဆရာ၏ စာအုပ်ကို ငှားဖတ်ပါ။ ထိုအခါ သူသည် သင်နှင့်အတူ စွန့်စားမှု
များ၊ အချစ်ကိစ္စများ သို့ မဟုတ် သူဖော်ပြသော သတ္တိကောင်း ယောက်ျားမိန်းမများ၏ ဇာတ်လမ်းနှင့် စိတ်ဝင်စား
ဖွယ် အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရ လိမ့်မည်။ စာအုပ်များတွင် သင့်အနေနှင့် ဖျော်ဖြေမှုကို တွေ့နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ဝင်စားဖွယ်များကို တွေ့ရမည်။ သို့မ ဟုတ် ရယ်စရာ ကောင်းသောဇာတ်ကောင်နှင့်လည်း ရင်
ဆိုင်ရမည်။ ၄င်းတို့က သင့်ဝိညာဉ်အတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက် ဖြစ်လာနိုင်သည်။ စာဖတ်ခြင်းနှင့် သင့်လုပ်
ငန်းခွင်ကိုလည်း ကူညီပေသည်။ သင်နှစ်ပေါင်း ၂၀လောက်တိုင်အောင် လုပ်ငန်း ခွင်တွင် ရှာမတွေ့ခဲ့သော
အထူးသတင်းရပ်များနှင့် ဖြေရှင်းနိုင်သော အချက်အလက်များကို စာအုပ်ထဲမှ တွေ့လာနိုင်သည်။
စာကြည့်တိုက်ကောင်းတစ်ခုသည် အိမ်တက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်းပင်ဖြစ်သည်။ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း ၏ တစ်သက်
တာ ကျောင်းသက်တမ်းသည် ၁၂လထက် မပိုပေ။ သို့သော် သူသည် စာဖတ်ဝါသနာကြီးသူဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့
တွင် တွေ့သမျှ စာအုပ်တိုင်းကို ဖတ်၍ ဖတ်သမျှကို မှတ်ထားနိုင်သူဖြစ်သည်။ သမိုင်း၊ ဥပဒေ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထု၊
ကဗျာ၊ အမျိုးစုံပင် ဖြစ် သည်။ သူသည် ဗဟုသုတ အကြွယ်ဝဆုံးသမ္မတဖြစ်ရုံမျှသာမက စကားပြိုင်၍ ပြောနိုင်
စာအုပ်များ၏ ပေါင်းဖော်မှုမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ် ဘ၀အတွက်များစွာသော တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် စိတ်ဝင်စား
ဖွယ် အချက်များ ရနိုင်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်တွင်းမှ စာမျက်နှာတစ်ခု၊ စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်သည် လူတစ်ယောက်အဖို့
သူ ယခင်တစ် ကြိမ်မျှ မမြင်ဖူးသေးသော အမှန်တရားအတွက် သူ့မျက်စေ့ကို ဖွင့်ပေးနိုင်သည်။ သူ့အတွက် သစ်
လွင်သော သတ္တိတစ်မျိုးကို ရလာနိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ရှိသောအခါ၊ စိတ်ဓာတ်သတ္တိနည်းသော
အခါ၊ စိတ်ပျက်အားလျော့နေသောအခါ၊ အားသစ်အင်သစ်ကို စာအုပ်က ပေးပေလိမ့်မည်။
သင့်တွင် စာဖတ်အကျင့်ရှိစေချင်သည်။ လူများစွာတို့၌ မရှိကြပေ။ စာဖတ်တတ်ရန် သင်ပေးလိုက်သော ကျောင်း
မှ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သူတို့သည် သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှလွဲ၍ မဖတ်သူ အတော်များသည်။ ယင်း
ကား အလွန်အ ဖိုးတန်သော အခွင့်အရေးများကို လစ်လျူရှုရာ ရောက်ပေသည်။
အာနိုးဘက်နက် က သူ၏ စာပေအရသာ ဟူသော စာအုပ်တွင် စာပေ၏ လစ်လပ်မှုကို မျက်မှောက်မပြုတတ်သူ
သည် မွေးဖွားကတည်းက နိုးထမလာသောသူပင် ဖြစ်၏။ သူသည် မွေးဖွားလာသူဟုပင် မခေါ်ထိုက်ပေ။
သူသည် မမြင်နိုင်၊ မ ကြားနိုင်၊ ပြည့်ဝသော အသိဖြင့် မခံစားနိုင်ပေ။ လူသာဖြစ်၍ အသက်ရှိနေသော်လည်း
၀က်အရှင်တစ်ကောင်ထက် ဘာမျှ ပိုမို မထူးခြားချေဟု ရေးထားသည်။
ကျွန်ုပ် အကြံပေးလိုသည်မှာ သင့်ဘာသာသင် စာကြည့်တိုက် သို့မဟုတ် စာအုပ်အငှားဆိုင်သို့သွား၍ သင်စိတ်
၀င် စားမည့် သို့မဟုတ် သင်မကြာခဏ ကြားဖူသည့် သင့်ကို ဆွဲဆောင်ချက်ရှိမည့် စာအုပ်ကိုသာ ဆွဲယူဖတ်ရှု
ရန်ဖြစ်သည်။ ထို နေရာမှ စတင်ပါ။ မည်သည့်စာ ဖြစ်စေကာမူ ကိစ္စမရှိပါ။ သင့်အား မည်သည့်စာဖတ်ရမည်ဟု
ကျွန်ုပ်မညွှန်ကြားလိုပါ။ သင့် ဘာသာသင်ရှာပါ။ ရွေးချယ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သော စာအုပ်သည် တုန်လှုပ်ချောက်
ချားဖွယ် သို့မဟုတ် မှုခင်းနှင့် လျှုိ့ ၀ှက် သည်းဖို သို့မဟုတ် အချစ်နှင့် ခရီးသွားစာပေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
ယင်းသည် သင် စတင်ရန် ခြေလှမ်းသာဖြစ်သဖြင့် ကိစ္စ မရှိ သေးပါ။
အကယ်၍ ဤစာအုပ်ကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက သင့်တွင် အခွင့်အရေးများ ရှိလာပေတော့မည်။
ထိုလမ်းကြောင်း အတိုင်း သင်ဖတ်လိုသည့် ဆန္ဒအတိုင်း ဖတ်ရန် စာအုပ်များစွာ ရှိလာပေလိမ့်မည်။
ဤနည်းသည် သင်လုပ်ထိုက်သောနည်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စာရေးဆရာတစ်ဦးကြောင့် ဘ၀အတွက် စိတ်
၀င် စားဆုံးအဖြစ် လှုပ်နှိုးခြင်းခံလိုက်ရကာ စာဖတ်ဝါသနာပါသွားစေနိုင်သည်မျိုးလည်း ရှိတတ်သည်။ ယင်းသည်
သင်၏ စာအရ သာခံမှု တိုးတက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး နောက်တွင် သင်သည် တစ်မျိုးထဲမှ တိုးချဲ့ လာပေလိမ့်မည်။
သင်အပြောင်းအလဲ ပြုလို သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပေမည်။
ဤအချက်သည် စာဖတ်သမား၏ တိုးတက်လမ်းတွင် ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ဖတ်
နေ ကျ အမျိုးအစားမှ ကွဲလွဲသော အခြားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုရန်ပင် ဖြစ်သည်။
လိုင်းသစ်တစ်ခုပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ နယ်သစ်တစ်ခု အခြေချရန် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် စိတ်ကူးယဉ်
အချစ်ဝတ္ထုများကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုပါက စိတ်ကူးယဉ် မဟုတ်သော စာအုပ်မျိုးကို စာအုပ်စင်၌ ကြိုးစား၍
ရှာဖွေကြည့်ပါ၊ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို ကြိုးစားဖတ်ရှုကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ထိုစာရေးဆရာ၏
ရေးဟန်သည် သင့်အားစွဲဆောင်ချက် မရှိဟုဆိုလျှင် သို့မဟုတ် သင့် အတွက် အလွန်ဖတ်ရ ခက်ခဲသော စာအုပ်
ဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင် စာအုပ်ကို ပြန်ချထားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်မှ ထပ်ဖတ်ရန် ကြိုးစားပါ။
ဂျီကေချက်စတန် က စာအုပ်များသည် ကျွန်ုပ်ဖတ်စက ကျွန်ုပ်အတွက် ကမောက်ကမနိုင်လှသည်။
သူ့အဓိပ္ပာယ်များ သည် ကျွန်ုပ်အတွက် နားမလည်နိုင်။ ထိုစဉ်က ကျွန်ုပ်သည် အသက်ငယ်သေးသည်။
နောင်နှစ်ပေါင်း အနည်းငယ်ကြာ၍ ကျွန်ုပ်စာဖတ်နယ် ကျယ်လာသောအခါ ထိုစာမျက်နှာများသည် ကျွန်ုပ်အ
တွက် အလွန်စူးရှထက်မြက်သော အတွေးအခေါ် များကိုပေးသည့် စာကြောင်းများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်အတွက် အတွေးအခေါ်သစ် များစွာရသည်ဟု ရေးဖူးသည်။ ဂန္တ၀င်မြောက် စာပေများသည် သင့်အတွက်
အလွန်မြင့်လွန်းသည်ဟု ပြောရန်မလိုပါ။ ထိုစာအုပ်သည် ခက်သည်၊ ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းသည်၊ သို့သော် ဤစာ
အုပ်၌ အလွန်အဖိုးတန်သော အချက်များရှိ၍သာ ဤမျှသက်တမ်းကြာရှည်စွာ ထင်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်မည်ဟု မှတ်
ရှိတ်စပီးယား သို့မဟုတ် ဘားနဒ်ရှော ၏ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကို ဖြစ်စေ၊ ဒစ်ကင်း၊ သက်ကရေး၊ ဂေါလ်စ်ဝါသီ၊ ၀ဲ၊ ဘဲ
နက် စသော စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဝတ္ထုများထဲမှ တစ်ပုဒ်ကိုဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ၀ဲ၏ ကမ္ဘာ့သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်ကို
ဖြစ်စေ ကြေညက် အောင် လေ့လာမည်ဆိုပါက ၄င်းသည် ဒုတိယအတန်းအစား စာအုပ်များနှင့် စာကြည့်တိုက်
တစ်တိုက်လုံးမှ စာများကို ဖတ် ခြင်းထက် သင့်စိတ်ဓာတ်ကို ပို၍လျင်မြန်ကျယ်ပြန့်စွာ တိုးတက်စေလိမ့်မည်။
သင်သည် စာဖတ်ခြင်းများလာသောအခါ ဖတ်ပျော်သော စာအုပ်များဟူသော စာအုပ်စာရင်းမျိုး၊ စာဖတ်သူ၏
ဝေဖန် ချက် ဆောင်းပါးမျိုးကို ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် မည်သည့်စာအုပ်မျိုး ဖတ်သင့်ကြောင်း စာအုပ်ကောင်းများ
ကို တွေ့လာပါလိမ့် မည်။
စာဖတ်သူကို အကြံပေးလိုသည်မှာ လွတ်ကွက်မရှိအောင် ဖတ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်စင်တစ်မျိုးမှ အခြားတစ်
မျိုး သို့ အပြောင်းအလွဲဖတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည် အကျိုးများသည်။ ဤသို့ဖတ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ဖြုန်းရာ မ
ရောက်ပေ။ စာ အုပ်တိုင်းသည် သင့်အသိဥာဏ်ကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ကျယ်ပြန့်စေပေလိမ့်မည်။ ချဲ့
ထွင်ပေလိမ့်မည်။ အတွင်းစိတ် အတွင်းအားကို ပိုပြီး လေးနက်စေပေလိမ့်မည်။ စိတ်ဓာတ်အင်အားနှင့် ၀ိညာဉ်
အင်အားကို တိုင်းတာနိုင်စွမ်း မရှိလောက် အောင်ပင် ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။
သင်သည် မည်သည့်စာဖတ်သူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိရန်အရေးကြီးသည်။ စာဖတ်ရာတွင် အာရုံစူး
စိုက်မှု မရှိခြင်းသည် အကျိုးမများလှပေ။ အချိန်မှန်စွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖတ်ရှုခြင်းသည် သင့်စာဖတ်အရှိန်ကို
စာဖတ်စတွင် ကိုယ်ပိုင်စာဖတ်နှုန်းအတိုင်း ဖတ်ပါ၊ မလောပါနှင့်။ အချို့ သူတို့သည် စာတစ်မျက်နှာ အခန်းတစ်
ခန်းကို လျင်မြန်စွာ ချုံး၍ ဖတ်သွားသည်။ ထို့နောက်မှ လိုအပ်ပါက နှေးကွေးစွာ ပြန်ဖတ်သည်။ ဤနည်းသည်
သင့်စိတ်ကို ကင်မရာတစ်ခုကဲ့သို့ သဘောထားပါ။ သင့်မျက်လုံးသည် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ၊ ရုပ်ပုံ
များ၊ အတွေးအမြင်များကို သင်ဖတ်နေသော စာအုပ်ထဲမှ ရိုက်ယူနေသည့် မှန်ဘီလူးပင်ဖြစ်သည်။
သင်ဆုပ်ယူရရှိနိုင်သော အချက် အလက်များသည် သင့်စိတ်အာရုံက စူးစိုက်သည့်အချက်ပေါ်တွင်သာ မူတည်
သည်။ ထို့ကြောင့် အာရုံစူးစိုက်ပါ။ နာရီဝက်မျှ အချိန်ပေးနိုင်သည် ဆိုပါစို့၊ ထိုအချိန်လေးတွင်ပင် သင့်အာရုံတစ်
ခုလုံး သွင်းထားခြင်းဖြင့် သတ်ဖတ်နေသော အချက်များ သည် ပို၍ သိသာထင်ရှားလာမည်။ ရှင်းလင်းလာမည်။
သင့်စိတ်ထဲတွင် ပို၍ မှတ်မိနေပေလိမ့်မည်။
စာဖတ်ရာတွင် မိမိက အရေးကြီးဟု ထင်သမျှကို မျဉ်းသားခြင်းသည် အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ မျဉ်း
တားခြင်းကြောင့် ထိုစာမျက်နှာ အတွေးရုပ်ပုံသည် သင့်ဦးနှောက်ထဲသို့ ခိုင်မာစွာ ၀င်ရောက်လာသလို သင်ဖတ်
သည့် အချက် ကိုလည်း စိတ်ဓာတ်အပြည့် စူးစိုက်အောင် လုပ်ရာရောက်သည်။ ဤနည်းဖြင့် စာဖတ်ခြင်းသည်
ပို၍နက်ရှိုင်းသဖြင့် အကျိုးအ မြတ်ရဖို့ သေချာပါသည်။ စာဖတ်ရာတွင် ပို၍ အဓိကထားရမည့်အချက်မှာ စာအုပ်
များသည် အသက်ရှိသောလူက ရေးထား သဖြင့် အသက်ရှိသော အရာပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် သူတို့၏ အတွေး
များကို ဝေမျှခံစားသည်။ ထို့နောက် သူတို့၏ အတွေး များကို သင်ကလိုက်တွေးသည်။
အချစ်ဝတ္ထု အတ္ထုပ္ပတ္တိ သို့မဟုတ် ပြဇာတ်တစ်ခုခုတွင် စာရေးဆရာသည် ဘ၀ကို သူမြင်စေချင်သည့်အတိုင်း
သင့် အားလည်း ကြည့်နေခိုင်းသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော် သင်သည် လူတို့အား သူတို့၏ ပြဿနာများ၊
အခက်အခဲများ၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့် လူသား၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဘ၀ကို လေ့လာနေခြင်း
တစ်နည်းအားဖြင့် သင်သည် ယောက်ျားများ၊ မိန်းမများ၏ မျှော်လင့်ချက်များ၊ စိတ်ကူးယဉ်ချက်များ၊ သူတုိ့၏
ကြောက်ရွံ့ ချက်များ၊ မျှော်မှန်းချက်အသေးအဖွဲများ၊ သူတို့၏ စွဲဆောင်မှုများ၊ ရှုံးနိမ့်မှုများ၊ အတွေးအမြင်များ၊
၀ါဒရေးရာများ၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် သတ္တိများကို စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် လေ့လာနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သင်သည်
သင့်ဘ၀အတွက် မည်သည့်စာ မျိုး ဖတ်နေသည်ကို ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ ထိုစာအုပ်က သင့်ဘ၀အကြောင်း၊
အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း မည်မျှသင်ကြားလိုက် သည်ကိုလည်း တွေးကြည့်ပါ။
သင်သည် ဧကရာဇ်၊ သူရဲကောင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျူလီယက်ဆီဇာ ၏ ဘ၀စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်သည် ဆိုပါစို့၊
ဂျူးလီ ယက်ဆီဇာ၏ အာဏာသည် ဟစ်တလာ၊ စတာလင် သို့မဟုတ် သင့်လက်ရှိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၏
အာဏာနှင့် နှိုင်းယှဉ် တွေးကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ရှိတ်စပီးယား သို့မဟုတ် အာသာမေလာ ၏ ပြဇာတ်
တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရသည် ဆိုပါစို့။ ထို စာအုပ်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်များ၏ ပုံဖော်ကျူးချက်သည် သင့်အသိများထဲမှ
တစ်စုံတစ်ဦးကို ပို၍နားလည်သဘောပေါက်စေရန် မည်ကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံ့မှုပြုကြောင်း တွေးကြည့်ပါ။
စာအုပ်များကို သင်ဖတ်ပြီးတိုင်း ယင်းတို့သည် သင့်လက်ရှိဘ၀၌ မည်မျှအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းကို
လည်း ပြန် မေးပါ။
စာအုပ်များကို သင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ၄င်းတို့က သင့်အား သင်ကြားပါစေ။ ထိုအခါ သင် မသိ
မတတ် ဖူးသေးသော အချက်များစွာကို သင့်အသိတရားအလျောက် နားလည်ခြင်း၊ သဘောတရားကို သင်ကိုယ်
တိုင်အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ အခြားသူများအတွက်သော်လည်းကောင်း ပို၍ တတ်သိလာပါလိမ့်မည်။
သင်သည် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်း သော နာရီပေါင်းများစွာကို လတ်ဆတ်လန်းဆန်းသွားအောင် ပြုလုပ်လာ
နိုင်လိမ့်မည်။ ၄င်းပြင် နေ့စဉ် ဘ၀၏ နေထိုင်ရေးကို လည်း တွေးလာပါလိမ့်မည်။ သင့်ဘ၀ကို အကျိုးပေးကောင်း
အောင် သင်ဖန်တီးရာ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
စာဖတ်ခြင်းသည် လူအတွက် လွန်စွာ အရေးကြီး၏။
ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သောအစားကိုစားရသလို စိတ်အတွက်လည်း လိုအပ်သောစာကိုဖတ်ရလေသည်။
ယခုခေတ်သည် အရင်ခေတ်နှင့်မတူ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်သောခေတ်ဖြစ်သည်။
ကြီးပွားရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး ထိုအကြောင်းများနှင့်ဆိုင်သော စာများကိုမဖတ်ပါက သိသင့်သလောက်မသိသဖြင့်ခေတ်နောက်ကျ နေတတ်ကြလေသည်။
စာဖတ်ခြင်းသည် အသိညဏ်ကိုတိုးပွားစေ၍ မှားသောအယူအဆများကို ပျောက်စေသည်။
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသော အက်ဒီဆင်၊ သမ္မတလင်ကွန်းး စသည်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များသည် စာအရမ်းဖတ်သူများဖြစ်ကြသည်။
လူတို့သည် လက်တွေ့အနေဖြင့် မည်သည့်အလုပ်၊မည်သည့်အကြောင်းအရာတို့ကို ကုန်စင်အောင်မသိနိုင်၊
နှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သော လူပေါင်းများစွာတို့၏ အသိပညာ၊ဗဟုသုတများကို စုစည်းထားသော စာအုပ်များကို ဖတ်မှသာလုံလောက်သော အသိညဏ်ကိုရနိုင်ပေသည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်တော့မည်ဆိုလျှင် ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့သူနာမည်နဲ့ ငါ့ကိုလုံလောက်သောအသိပညာ၊ဗဟုသုတပေးနိုင်လားဟူသောမေးခွန်းတို့ဖြင့် စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ရပေမည်။
စာမဖတ်သူသည် ကြီးပွားတိုးတက်ရေးလမ်း၌ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီး ဆက်မသွားနိုင်ပဲဖြစ်တတ်သည်။
စာဖတ်သူမှာကား လမ်းခရီး၌ အခက်အခဲတို့နှင့်ကြုံတွေ့စေကာမူ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်သည်။
စာဖတ်ခြင်းကြောင့် တိုးတက်ကြီးပွားလာသူတို့၏ စာရင်းကို ပြုစုရမည်ဆိုရင် အလွန်များပြားလှသည်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် စာဖတ်ခြင်းအလုပ်ကို မိမိနှင့်မဆိုင်ဟု သဘောမထားပဲ
မိမိတို့လူမျိုး၊ မိမိတို့ဘ၀၊ မိမိတို့စာပေ၊ မိမိတို့နိုင်ငံ တိုးတက်ရေးအတွက် စာဖတ်သင့်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။တတ်သလောက်မှတ်သလောက် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by SLIP in စာပေလေ့လာဆည်းပူးခြင်း, အတွေးမှတ်စုများ
စာအုပ်ကို မီးရှို့ခြင်းထက် ပိုဆိုးတဲ့ အပြစ်က စာမဖတ်ခြင်းပဲ။
There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them.― Joseph Brodsky
ယဉ်ကျေးမှု့တခုကို ဖျက်ဆီးချင်ရင် စာအုပ်တွေကို မီးရှို့ဖို့မလိုဘူး။ လူတွေကို စာမဖတ်ချင်အောင်ပဲ လုပ်လိုက်။
You don't have to burn books to destroyaculture. Just get people to stop reading them. ― Ray Bradbury
ဘယ်လောက်အလုပ်များပါစေ စာဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဗဟုသုတ ဆင်းရဲမှုကြောင့် သင် ကျဆုံးသွားလိမ့်မည်။
No matter how busy you may think you are, you must find time for reading, or surrender yourself to self-chosen ignorance."― Confucius
နောက်ဆုံးစာမျက်နှာကို လှန်လိုက်လို့ စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကို ဖတ်ပြီးသွားပြီလို့ သိလိုက်ချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောာက် ဆုံးရှုံးသွား သလိုမျိုး သင် ခံစားမိလိမ့်မယ်။
You know you've readagood book when you turn the last page and feelalittle as if you have lostafriend.― Paul Sweeney
ကလေးတစ်ယောက်လို ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု့အတွက် (သို့) အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုမှု့အတွက် (သို့) အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားဖို့အတွက် စာ မဖတ်ပါနှင့်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် စာဖတ်ပါ။
Do not read, as children do, to amuse yourself, or like the ambitious, for the purpose of instruction. No, read in order to live.― Gustave Flaubert
ကျွန်ုပ်တို့ အထီးကျန်မဖြစ်နေဘူးဆိုတာ သိဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ စာတွေဖတ်နေကြတယ်..။
We read to know that we are not alone. ― C.S. Lewis
လူအချို့က ရုပ်မြင်သံကြားကလာတဲ့ ပညာရပ်တွေကိုသာ ကြည့်နေတတ်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ် ကတော့ တခြားအခန်းကိုသွားပြီး စာတစ်အုပ် ဖတ်လိမ့်မယ်။
I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and readabook. ― Groucho Marx
စာများများ ဖတ်လျှင် များများ ပိုသိလာမည်။ များများလေ့လာဖို့အတွက် နေရာများများ သွားဖြစ်လာမည်။
The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. ― Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut!
မင်းဟာ ငါ့အတွက် လက်ဖက်ရည် ကြီးကြီးတခွက် (သို့မဟုတ်) မဆုံးနိုင်ရှည်လျားတဲ့ စာအုပ်တအုပ် တော့ ဘယ်တော့ ရှာပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
"ဂန္တဝင်စာပေ" ဆိုသည်မှာ လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းတွေ လို့ သတ်မှတ်ကာ သာခံရပြီး မဖတ်ကြသည့် စာအုပ်မျိုးကို ခေါ်သည်။
'Classic' -abook which people praise and don't read.― Mark Twain
စာရေးသူကိုယ်တိုင် ငိုပြီး မရေးလျှင် စာဖတ်သူလဲ ငိုမှာ မဟုတ်ပါ ။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် မအံ့သြရင် စာဖတ်သူအတွက်လည်း အံ့သြောစရာ မဟုတ်နိုင်။
No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader. ― Robert Frost
စာအုပ်များသည် လေယဉ်ပျံ (သို့) မီးရထား (သို့) လမ်း နှင့်တူသည်။ သူတို့သည် ရွှေ့လျှားနေကြသည်၊ ခရီးသွားနေကြသည်။ သို့သော် အိမ်ထဲတွင် အားလုံးရှိသည်။
Books are the plane, and the train, and the road. They are the destination, and the journey. They are home. ― Anna Quindlen, How Reading Changed My Life
စာကြည့်တိုက်ကောင်းတခုဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သပ်ရပ်မနေသလို ဖုံလည်း ထူမနေဘူး။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စင်ပေါ်က စာအုပ်တွေကို ယူပြီး ညဉ့်နက်ထိ စာဖတ်တဲ့သူ တယောက်ယောက် အမြဲရှိနေတတ်လို့ပဲ။
A good library will never be too neat, or too dusty, because somebody will always be in it, taking books off the shelves and staying up late reading them. ― Lemony Snicket, Horseradish: Bitter Truths You Can't Avoid
စာဖတ်ဖို့အချိန် မရှိဘူး၊ စာရေးဖို့ အချိန်မရှိဘူးလို့ သင့်ကိုယ်သင့် ထင်နေသမျှ သင်ဟာ သာမန်လူသာတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေအုံးမှာပဲ။
If you don't have time to read, you don't have the time (or the tools) to write. Simple as that. ― Stephen King
Facebook Timeline ကိုဖျတ်ပစ်မယ်
ကျွန်တော်ဒီတခါပြောပြချင်တာက Facebook အသုံးပြုသူများ Timeline ကိုဖျတ်ပစ်ချင်သူများအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ရှာတော့ရှာတာပဲ ဒီနည်းလေးပဲတွေ့တာ။ မသိသောသူများအတွက်ပါ ။ အရင်ဆုံး ဒီလင့် လေးကို Firefox မှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Firefox ကို restart ပေးပါ။ Firefox ပြန်ပွင့်လာပြီဆိုရင် အပေါ်ဆုံးဘားတန်း က Tools ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ Default user agent ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် အဲဒီဘေးကိုဆက်သွားပါ။ Internet explrorer ကိုရွေးပါ။ အဲဒီကနေမှ Internet explorer7ကိုရွေးပါ ။ ပြီးရင် Facebook ကို reflash ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Facebook က ဟိုးအရင်အဟောင်းကို ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက ဒီနည်းလေးက အပြည့်အ၀ မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဗျာ။ Firefox ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်း မှာ Default user agent ကနေ Internet explorer7ကိုပြောင်းပေးရတယ်ဗျာ ။ တကယ်လို့ပြောင်းမပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီ Timeline ကြီးက ပေါ်နေပြန်ရော ။ အဲဒါလေးကို Firefox ဖွင့်တိုင်းမှာပြောင်းပေးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနည်းလေးပဲ သိသေးလို့ပါ။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းလေးရှိရင်လည်း ပြောပေးကြပါနော်။ ကျွန်တော်က Timeline ကိုကြိုက်ဘူး။
တစ်ပတ်အတွင်း Facebook ပေါ်မှ သူတပါးမသိစေလိုသော အချက်အလက် အားလုံး ရှင်းပါ
19:13 Myanmar Express Group No comments
Facebook ပေါ်မှ မိမိလှုပ်ရှားထားသမျှ ဟိုးတုန်းက ဒေတာများ အားလုံးကို ဖော်ပြတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် မိမိမမြင်စေလို၊ မသိစေလိုသော အချက်အလက်များ၊ ပုံများ၊ စာများကို တစ်ပတ် အတွင်း ၀ှက်ရန်အတွက် facebook က ၇ ရက် အချိန်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ Timeline ကို မနှစ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ မသိ၍သော်လည်းကောင်း မသုံးပဲ ထားသူ အားလုံးလည်း မဖြစ်မနေ သုံးကြရမှာဖြစ်ပြီး facebook က အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Timeline ၏ သဘောအရ facebook စ တင် အသုံးပြုချိန်မှ စပြီး အချိန်ပိုင်းအလိုက် ခွဲခြား သိမ်းဆည်းထားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မိမိရဲ့ တစ်ချိန်က လှုပ်ရှားထားသမျှကို အခြားသူများက သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook သုံးစွဲသူ ၃၀% ခန့်သာ Timeline ကို နှစ်သက်ကြပြီး အများစုက သဘောမကျကြဘူးလို့ သိရပေမယ့် Timeline ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဒေတာများကို ကြိုက်တဲ့ ရက်စွဲနဲ့ ပြောင်းလဲတင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲလ် ပေါင်း 150 ကျော်
65.TuneUp Utilities 2011
66.GetData Recover My Files Professional 4.6.6.830
67.Yamicsoft Windows7 Manager
88.Blu-Ray2DVD II Pro v2.80
90.MP3 Player Utilities 5.02
91.Xilisoft DVD Ripper Ultimate 6
148.RemoverPasswordDeepFreeze (for deepfreeze 6...)
ရွှေတိဂုံစေတီတော် နှစ်၂၆၀၀ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စ...
စာမဖတ်သူအကန်းနဲ့တူ ၊ အကျိုးပေးကောင်းချင်လျှင် စာဖတ...